Erdogan oo codsaday in loo soo gacan geliyo dadka looga shakisan yahay dilka Jamaal Khaashuqji - BBC News Somali
Image caption Erdogan wuxuu sheegay in uusan waxyeello u gaysaneeynin sumcaddaboqortooyada Sucuudiga qoyska
Recep oo ka hadlayay shirka dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee ka socday Argentina ayaa sheegay in arrinta Khaashuqji aanan loogu talagelin in shirka looga hadlo balse ra'iisul wasaaraha Canada, Justin Trudeau oo kaliya ah ayaa kulanka kusoo hadal qaaday dhacdada ku aadan Khaashuqji.
Dowladda Sucuudiga ayaa 11 qof u xirtay dilka balse ma jiraan go'aan ay dadkan ugu dhiibeyso Turkiga.
Wuxuu ku eedeeyay mas'uuliyiinta Sucuudiga inay hayaan been iyo hadallo is-burinayo isla markaasna ay baddalayaan sida ay wax u dhaceen ayna diideen inay macluumaad la wadagaan baarayaasha Turkiga.
Wuxuu sheegay in dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan uu kulanka madaxda G20 ka sheegay 'sharraxaad aanan la rumeysan karin' oo ku aadan dilka Khaashuqji.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ku tilmaamay arrinta ku saabsan saxafigii la waayey - xilli uu booqanayey qunsuliyadda Sucuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbuul mid niyad jab ah. Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in Jamal Khashoggi - oo ahaa nin dhaliila madaxda Sucuudiga - in lagu dhex dilay dhismaha qunsuliyadda.
Image caption Khaashuqji boggiiska Twitter-ka waxa ku taxan 1.6 milyan oo qof
Image caption Maxamed Bin Salmaan wuxuu sheegay in uusan wax ka ogayn dilka Weriye Jamaal Kaashogji
Image caption Ceelasha shidaalka Sucuudiga